I-Dubai City Inkampani: I-No.1 e-Middle East 🥇 Uncedisa i-Expats!
I-Dubai City Inkampani - Isikhokelo kunye neenkcukacha zoLwazi lweZithuba
dubai Inkampani yeSixeko inceda abantu Ukufumana okuncinci malunga ne-United Arab Emirates. Injongo yethu kukusondela kwinkcubeko yama-Arabhu. Inkampani yethu isebenza njengoluvo olulula lokuqonda. Ukubonelela ngolwazi kunye nesikhokelo yabantu kwihlabathi liphela malunga ne-United Arab Emirates. The Dubai City Inkampani iyakha ngokutsha blog ngokuba kwenzeka ntoni eDubai, eyethu e-Abu Dhabi. Uya kwaziswa ngamajelo eendaba ezentlalo. Kwaye ungakhankanyi, ngoku abalandeli bethu isuka kwi-Linkedin nakwi-Facebook ukuthumela uhlaziyo kunye namanqaku ebhlog yethu. Ke, ukuthetha ngokubanzi, ukuba kunjalo bahlala e Dubai okanye uthanda nje indlela yokuphila ye-Emirates. Wamkelekile ukuba ube ngomnye wabalandeli bethu.
Ngoku sibhalela abafuna umsebenzi wehlabathi!
Imisebenzi yase-Dubai 2019-2020 ne-DCC. Sinika isandla ngokuncedisa kwii-expats kwingingqi ye-Gulf. Ngoku inokufumaneka kunye Inkampani yethu yokuqesha e-UAE. Sinikezela ngeenkonzo ezininzi zasimahla e-Emirates. Into yokuqala ekufuneka uyikhumbule simahla kuba nabani na ukongeza iinkcukacha kwinkampani yethu. Kuba sikho ukubeka abantu abafuna umsebenzi abavela phesheya ukuze bafumane imisebenzi eMiddle East. Sisoloko sinceda abantu abafuna umsebenzi ukuba baqalise entsha e Dubai. Ngaphezu koko, Inkampani yethu isebenza eDubai nase Abu Dhabi. Ukubonelela ngeenkonzo ezirenti eziphezulu kwimarike yokuqesha. Kwelinye icala, lethu Kwi-website yomsebenzi wase Dubai Unceda ngaphezu kweendwendwe ze-1 Million ehlabathini lonke. Ngenxa yokuba ufumana umsebenzi e-Dubai akuyona into elula ukwenza ngokukodwa kwi-2019 ne-2020.
Njengokuba kunjalo, i-Dubai City Inkampani yenye yezona zinto zininzi abafunyanisi bemisebenzi abadumile be-UAE. Ifemu yethu ibonelela ngeenkonzo ezigqwesileyo ze Indian abagxothiweyo. Kwaye kunye nenkampani yethu ukubonelela ngeengcebiso zomsebenzi kunye namaqhinga. Kwaye kunjalo, okunokwenzeka okukhulu ngendlela ekhawulezayo yokufumana izithuba zomsebenzi kwi-United Arab Emirates. Sijonge ekubeni yinkampani yeNo1 yabasebenzi abatsha bamazwe aphesheya eMbindi Mpuma. Ngapha koko, sisebenza nzima ukuyifakazela le IUnited Arab Emirates. Ukufaka ukubuyela kwakho kuyo Inkampani yase Dubai ilula kwaye indlela esebenzayo yokufumana umsebenzi.
Yenye yezona zinto zinkulu onokuzenzela zona malunga nomsebenzi wokukhangela. Kwaye nomsebenzi omtsha kwi-UAE okanye Qatar. Ikamva lakho kunye nelakho losapho liya kukhuseleka. Kwaye imisebenzi ye-Dubai 2019 kunye ne-2020 zijikeleze nje kwikona yakho. Kuba ngoncedo lwethu uya kwenza fumana umsebenzi kwi-UAE.
Sinikeza i-Dubai Jobs 2019 - 2020 ukuze ithunyelwe!
Kwiindawo ezininzi zokuqashelwa e Dubai. Ngokuqinisekileyo silinganiswe phezulu kwaye sisebenza ngokukhawuleza. Inkampani yethu inikeza Ulwazi malunga nokudluliselwa kuMbindi Mpuma. Ke, enyanisweni, ukuba ujonga ukufumana umsebenzi ngaphakathi UAE. Inkampani yethu ilapha ukubonelela ngemisebenzi eMbindi Mpuma. Njengombandela wenyani, unokufumana i career eDubai okanye ngayo nayiphi na indlela, fumana ngakumbi ngeDubai City. Kwaye ngokuqinisekileyo Faka i-Resume ye-Dubai yeMisebenzi kwi-2020 yezithuba ezitsha. Nokuba kwenzeka ntoni, inkampani yethu ikunceda ufikelele kwimpumelelo yakho career kuzo zonke iinyathelo. Ingaba ungumceli womsebenzi omtsha, okanye uqala nje msebenzi e Dubai. Njengoko kunjalo, ungumqeshwa onamava. Kwaye kufuneka udikelele kwi-Emirates. Unako ngokuqinisekileyo fumana ulwazi oluxabisekileyo malunga nomsebenzi.
Iqela lethu lemini kwimisebenzi yamhla Jobs Dubai kwaye Amaqela okuBasa. Inceda izigidi zabantu abafuna umsebenzi ukuba bafumane umsebenzi ku-Mbindi Mpuma. Injongo yethu kukujonga ukufumana igama lakho ngaphandle kunye nokwakha indawo eqinile ishishini ubukho. Ngeenjongo zemisebenzi yomsebenzi onokuyifumana kunye neNkampani yeDubai City. Siza kuthatha eyakho ukukhangela umsebenzi ukuya kwinqanaba elilandelayo. Iqela lethu lokuqasha lihlala lifumana indlela yentengiso yakho kwaye ukunceda fumana umsebenzi kwi-UAE. Ngoko, i-Dubai Jobs 2019 - 2020 sele isifumaneka kubafundi bamazwe angaphandle.
Imisebenzi e-Dubai kwi-2019 kunye ne-2020 ngoku iyafumaneka
Ewe, kwiminyaka elandelayo, amawaka iinkampani kwiGulf. Ukujonga ukuqesha abantu abatsha abafuna umsebenzi. Ngale nto engqondweni, inkampani yethu ityikitye isivumelwano sokufumana ingqesho. Iinkampani ezilungileyo kakhulu kuluhlu lweForbes 500 ye abaqeshi baqesha e-UAE. Ke, ukuba ufuna imisebenzi eDubai 2019 silapha ukukunceda. Ngokuqhelekileyo, Inkampani yethu ibonelela ngemisebenzi phantse lonke uhlobo lwabantu. Umzekelo abasebenzi bezandla kunye nabaphathi abafundileyo. Ke, ukusebenzisa inkampani yethu kuyindlela yokuphuhlisa ikhondo lomsebenzi kwi-Middle East. Kwaye njengeyona ndlela ibhetele Ukufumana imisebenzi eDubai 2019.
Sibeka zonke iintlanga ukusebenzela kwelinye ilizwe e-Dubai
Imisebenzi ye-Dubai 2019-2020 sele ikhona. Ngokukodwa Ukukhutshwa kwiindawo ezikwiNqanawa yeGulf. Ke, kuya kufuneka ucinge ngokusebenza kunye nenkampani enexabiso eliphezulu kwi-UAE. Kukho iinkonzo eziphambili ze-2 esinazo zabasebenzi bamanye amazwe. Uncedo lomsebenzi onomdla wokufumana amathuba kwi-UAE. Inkampani yaseDubai City idume ngokuqinileyo luhlobo lonke lwezizwe. Kodwa ukuza kuthi ga ngoku sinempembelelo ephezulu kakhulu kwimidiya yoluntu. Ngaphezu koko, abathengi bethu babeka umbono olungileyo malunga nenkampani yethu kwi-Intanethi.
Imisebenzi e-Dubai kumaNdiya
Asibeki kuphela Ma Indiya kwaye Pakistani Umsebenzi welinye ilizwe eDubai. Inkampani yethu yokuqesha ukubeka abantu abavela kwihlabathi liphela. Ke, umzekelo, sinabaxumi abavela eMzantsi Afrika naseIndonesia. Ngaphezu koko, iYiputa neTurkey. Ke, njengoko ubona sibeka abasebenzi kuMbindi Mpuma abavela kwihlabathi liphela. Inkampani yaseDubai City, iyathetha ngokubanzi, ilawula ukunikwa kwemisebenzi ukusuka kwi-Middle East. Ngale nto engqondweni, sisebenza kuyo ISaudi Arabia, Khwatha kunye ne-Kuwait. Ke, inkampani yethu ijonge phambili ekuncedeni fumana umsebenzi kwi-UAE.
Inkampani yeDubai City - Isikhokelo kunye neVisa kunye noLwazi lweeNgxelo
Dubai: LAPHA UYA KUVA I-ADRENALINE
Isixeko, esidume ngokuba nezikhuseli ezinomtsalane kunye neehotele eziholideyini, zibonelela ngezinto ezithandekayo eziza kukhonza idosi enkulu ye-adrenaline kubafuna umnyhadala. I-Parachute gxuma, i-jeep uhambo lokuwela iindunduma zasentlango, ukubhabha ngeenqwelomoya, iipaki zomxholo ophambili okanye i-zoo engaphantsi kwamanzi-enye yezona zinkulu emhlabeni. Awungekhe uyiphose ukuba iimvakalelo zakho yile nto uyifunayo ngelixa ukwiholide.
Uya kufumana okunikezelwayo ngohambo oluya eDubai - ungabhukisha incwadi (iinqwelomoya, udluliso, ihotele ngesidlo sakusasa) malunga ne-USD 2,000 ngeveki.
Ukuhamba kweJeep entlango
IDubai ikhule enkqantosini, ngoko ke xa undwendwela kwesi sixeko, ungazihambeli kwimida yokuqaqambisa uyilo. Thatha ngokuhlwa kwenye uhambo lokuhamba nge-jeep, uhambo lokuya kwi-Gulf Desert. Njengomkhweli, uya kuchukumiseka yindlela umqhubi onamava ayenza ngayo imoto ahlala kuyo phantse ukuba 'ihamba' phezu kweendunduma zentlabathi. Ngaba ufuna ukuzama isandla sakho kwisondo? Ukuqasha ibhayisekile ye-quad ukuze uzinyange ngakumbi kwi-adrenaline. Iihambo ezilungiselelwe ukuya entlango zihlala ziphela ngesidlo sangokuhlwa ngomculo kwindawo evulekileyo, enkosi oya kuvakalelwa njani - hayi kwakude kudala-ukuphela komhla kubhiyozelwe abantu balapha.
Ngokutsiba ngeparachute eDubai, ungavuma enye yeembono ezimangalisayo ezenziwe ngumntu - isiqithi esenziwe ngobugcisa besundu (iJumeirah Palm). Olunye uhlobo lokuzonwabisa olugqibeleleyo yiXDubai ziplne, eyi-zipline, emiswe ngaphezulu kwimithombo yaseDubai, ejikelezwe zizikhuseli. Isitishi sokuqala se-tyrolean sinqunyanyisiwe malunga ne-90 m ngaphezulu komhlaba, kwaye indlela oya kuyigquma emoyeni ingaphezulu kwesiqingatha seekhilomitha.
Amaqondo obushushu eDubai ngexesha lethu lasebusika ayatshintsha ajikeleze i-25 degrees. Yisebenzise kwimidlalo yamanzi. Zama iFlyboarding, bhabha phezu kwamanzi, unyuke uye kuthi ga kwiimitha ze-8, zonke zineBurj Al Arab eyaziwayo ngasemva - ihotele enomgaqo wenqanawa ethathwa njengeyona intle kakhulu emhlabeni.
Iipaki zomxholo ogqithisileyo
Kukho iipaki ezininzi zokuzonwabisa eDubai kwaye ngaphezulu kusavulwa, ukuziqhayisa okunomdla okumangalisayo. Enye yazo yiAtlantis Aquaventure Warter Park kunye nezilayidi ezithe nkqo, enye yezona zinto zigqibeleleyo emhlabeni. Imvelaphi yesinye sazo siphela kumjelo weglasi ujikelezwe yindawo yokubhukuda ngookrebe. Abantu abafuna ukuzonwabisa baya kubafumana nakwi-IMG yeHlabathi yeThafa- ipaki enkulu yokuzihlaziya engaphakathi emhlabeni (enomoya, ebaluleke kakhulu ehlotyeni eDubai). Kukho i-super roller coaster ekhawulezayo ekhawulezayo ukuya kwi-100 km / h kwimizuzwana nje ye-2.5.
IDubai ayigcini ngokutsala kakhulu, kodwa kunye nemibono. Ngena kumgangatho wokubheka esakhiweni okude kakhulu, Burj Khalifa, ukuncoma i panorama emangalisayo yesi sixeko. Ndwendwela i-Dubai Aquarium, enye yezona zoo zinkulu zamanzi emhlabeni - itanki exubeka ngaphezu kwe-10 yezigidi zeelitha zamanzi kunye neentlobo ze-33,000 zezilwanyana zasemanzini, kubandakanya nesikolo sookrebe, ezinomtsalane.
Inkampani yeSixeko sase Dubai ngoku kubonelela ngezikhokelo ezilungileyo eDubai. Iqela lethu ligqibe ekubeni longe ulwazi ngolwimi ngalunye Dubai idlulisa. Ke, unale nto engqondweni, ngoku unokufumana guidesIingcebiso kunye nomsebenzi kwi-United Arab Emirates ngolwimi lwakho.
Pried wyjściem odwiedź nasze inne strony internetowe: Naprawa Samochodów Hybrydowych i Elektrycznych INaprawa Samochodów Hybrydowych Warsztaty i serwisy naprawy samochodów hybrydowych, Naprawa hybrydy - ASO oraz niezależny Warsztat. I-SEO - iWarszawa I-Pozycjonowanie stron w Warszawie, Taxi Lotnisko Radom Ukuhamba ngebhasi, iTeksi, z z Radomia do Warszawy, CPK - Port Lotniczy solidarność - Iiteksi zeWarsaw